China Mango, painiapulu, pọọpọ, guava nhazi igwe na mmepụta akara ụlọ ọrụ na-emepụta | JUMP
Mango, painiapulu, pọọpọ, igwe na-arụzi guava na ahịrị mmepụta
Mango, painiapia, pọọpọ, igwe na-arụpụta guava na ahịrị mmepụta dị mma maka ịmị mkpụrụ osisi ebe okpomọkụ dịka mango, painiapia, pọọpọ, guava na ihe ndị ọzọ.
Ọ nwere ike na-emepụta doro anya ihe ọ juiceụ juiceụ, turbid ihe ọbidụ juiceụ, lekwasị ihe ọ juiceụ juiceụ, mkpụrụ ntụ ntụ, mkpụrụ osisi jam. Nke a akara gụnyere afụ ihicha igwe, ndoli, nhọrọ igwe, ahịhịa ihicha igwe, ịcha igwe, precooking igwe, ekpepụsị na denudation igwe, crusher, belt juicer, separator, ịta akụrụngwa, sterilizer na ndochi igwe, wdg a na-emepụta usoro mmepụta echiche dị elu na ogo dị elu nke akpaaka; Isi akụrụngwa bụ nke igwe anaghị agba nchara, nke na-emezu nhazi ịdị ọcha nke nhazi nri. Ihe a n'ichepụta ihe eji emepụta ihe na-aga n'ihu, nnukwu ogo akpaaka; Isi akụrụngwa bụ nke igwe anaghị agba nchara, nke na-emezu nhazi ịdị ọcha nke nhazi nri.
Mango, painiapia, pọọpọ, guava nhazi igwe na mmepụta ahịrị gụnyere: scraper mbuli, belt mbuli, ịghasa ebu, bubbling ihicha igwe, drum ihicha igwe, ahịhịa ihicha igwe, mkpụrụ osisi nnyocha igwe, hama crusher, osa onu crusher, ịghasa juicer, belt juicer, nnukwu efere juicer, ikuku akpa pịa, ekpepụsị igwe, mkpụrụ remover, isi remover, otu / abụọ ngafe pulper, tupu esi igwe, enzyme inactivator, belt juicer, nnukwu efere juicer, ikuku akpa pịa, ekpepụsị igwe, mkpụrụ remover, isi remover, otu / abụọ ngafe pulping igwe, tupu esi igwe, enzyme na-egbu igwe, wdg Preheater, slitting igwe, Dicer, sugar agbaze ite, nchekwa tank, enzymolysis tank, mkpuchi anwụrụ, inggwakọta tank, inggwakọta tank, na-ada film abụọ mmetụta evaporator / ịta ite , amanye mpụga mgbasa ịta ite, diski centrifugal separator, ultrafiltration adsorption usoro, homogenizer, degasser, UHT (Ultra elu okpomọkụ ozugbo) nwoke ịga ụlọ igwe, igwe eji agba karama, igbe iyuzucha, igwe akara, atọ n'ime otu igwe na-ejuputa, wụsa sterilizer karama, tuner sterilizer, igwe mmiri sterilizer, sterilizer, igwe na-ehicha ikuku, igwe ntinye aha, igwe na-agba mmiri, usoro osmosis mmiri dị ọcha, usoro CIP, efere ụdị sterilizer, caser sterilizer, okpukpu abụọ isi na-enweghị isi akpa na-ejuputa igwe, diski centrifugal separator na efere etiti nyo pịa.
Mango, painiapulu, pọọpọ, guava nhazi igwe na mmepụta akara ngwugwu: karama, PITA karama plastic, zip-top ike, aseptic adụ ngwugwu, brik katọn, gable top katọn, 2L-220L aseptic akpa na drum, katọn ngwugwu, plastic bag , Tin 70-4500g.
Nke gara aga: Navel oroma, citrus, mkpụrụ osisi grepu, lemon nhazi igwe na mmepụta akara
Osote: Bluuberi, blackberry, mulberry, strawberry, raspberị, red bayberry, kranberị nhazi igwe na mmepụta akara